1. Pancakes zviri nyore kwazvo kugadzira. Zvimwe chete zvigadzirwa Uye hazvidi chakakosha michina senge Bheteri kana hovhoni zvakare Zvese zvaunoda imwe enamel pani yakakwana. Nhasi tine nzira yekugadzira mapancake. Nyore newe kusiya mumwe nemumwe. Unogona kuyedza izvi kumba.
2. Zvinowanikwa pamaPancake 1. Upfu hwegorosi 2. Shuga (inokurudzirwa seshuga tsvuku) 3. Poda yekubheka 4. Ruomba kana mafuta 5. Vanilla powder 6. Mazai 7.Mukaka mutsva. Zvinodiwa toppings senge chokoreti, jamhu yemichero, huchi, makuki, michero mitsva, nezvimwe.
3. Sanganisa zvinhu zvikuru pamwe chete, kusanganisira hupfu hwegorosi, 2-3 ladles, 1 zai, 2-3 scoops yemukaka mutsva, shuga, zvichienderana nekutapira kwaunoda. Ipapo vanhu ngavasanganise zvakanaka. Kana usina munhu anorova, zvakanaka. Inogona kushandiswa sedanda remuti pachinzvimbo
4. Tevere, wedzera zvimwe zvezvinhu izvi, kana zviripo: saga yevanilla poda yekunhuwirira uye hwema, uye imwezve poda yekubheka, inenge hafu yetiipuni, inokwana kurerutsa paniki. Asi chenjera uye usawedzere yakawandisa poda yekubheka, nekuti izvi zvinoita kuti paniki izadze yakawanda.
5. Batidza gasi, isa pani pamusoro pemoto wakadzika. Wedzera nezve 1 teaspoon yemafuta kana bhotoro uye uparadzire bhotela nedhiri kusvikira pese pani.
6. Kana iyo bhotela yanyungudika, shandisa ladle kana ladle kuburitsa paniki yepancake iyo yatakagadzirira nekuidururira pamusoro pepani kuita yakatenderera kana ichinge yawana zvidimbu 3-4 kubva mumusanganiswa weupfu hwakagadzirirwa kare, inofanira kubuda ingangoita 6. -8 zvidimbu, akagadzirira kushumira anenge maviri
7. Kana rumwe rutivi rukabikwa chaizvo, unogona kutendeukira kune rimwe divi. Ngwarira kuti usashandise moto wakanyanya. Uye edza kuseta iyo pani ye Moto unotumira kupisa zvakaenzana kupani. Iwo mapancake achabikwa panguva imwe chete.
8. Isa pahwendefa uye shongedza nechero zvigunwe zvaunoda, ingave chokoreti, jam yemichero, uchi, makuki, michero mitsva, nezvimwe. Iyo buttered vhezheni yakafanana zvakaenzana zvinonaka!
9. Uri kuzviita sei? Iyo nzira yekugadzira mapancake iri nyore kwazvo kupfuura zvaitarisirwa, handiti? Zvino, haufanire kuyananisa cafe nekuti Ini ndinogona kuzviita ini pachangu. Iwe unogona kuwedzera seakawanda matopping sezvaunoda. Zvizame, uye iwe uchave wakasungwa. Kutanga kunogona kunge kunonoka zvishoma, asi kana iwe ukaedza kuzvijaidza kazhinji Zvichanyatso kuve zvinonzwisisika Kusvikira rimwe zuva iwe uchazoziva iyo nzira yaunoda iyo iwe yaunoda Ndezvipi zvinongedzo uye yakawanda sei kuisa Deredza zvinotapira sezvaunoda. Izvo zvakanakira mapancake hazvisi nyore chete kugadzira. Ndichiri kunakidzwa nemavara matsva Nematopu zvakare Yedu anodiwa maBanana uye Nutella, saka iwe unoedza chii uye chii chaunofarira kudya mapancake zvakanyanya?